Bollywood actresses’ no make-up selfies – BRT NEWS
Bollywood actresses’ no make-up selfies
1/13 Bollywood actresses’ no make-up selfies
हामी सबै जान्दछोऊ कि सबै गुडिया माथि र सुन्दर हेर्नको लागि यदि तपाईं शोबिजको ​​एक भाग हुनुहुन्छ भने। पापार्जी को रडार को तल लगातार अभिनेताहरु र यसैले लगातार उनको चित्रहरु को लागी राम्रो लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो देखने को आवश्यकता हो। तर कहिलेकाँही, टुन्सेल शहरीहरू लाइनर, कंकर र लिपस्टिकहरू डच गर्न र सबैलाई छोडेर मन पराउँछन्। जब तिनीहरू ताजा उठ्छन् वा तिनीहरू घाँसमा हिंडिरहेका हुन्छन् भने, अभिनेत्रीहरूले प्रायः आफ्नो असिद्ध गफ गर्न मन पराउँछन् र लुकाउन सक्दैनन्। यहाँ केहि मनपर्ने स्वयंसेवीहरू तपाईंको मनपर्नेहरू हुन्। पढ्नुहोस!
एक ईर्ष्या शरीर संग, संक्रामक मुस्कान र त्यो सबै आकर्षण वह गर्दछन्, Disha Patani धेरै को लागि एक दिल चोरी हो। आखिर, उनको कारण Instagram मा9मिलियन भन्दा बढी अनुयायीहरू छन्। disha धेरै नियमित हुन्छ जब यो सोशल मिडियामा चित्रहरू पोस्ट गर्न आउँछ। उनी आफ्ना प्रशंसकहरूलाई उनको सुन्दर चित्रहरूसँग बौछार राख्छन् र अझैसम्म हामी उनीहरूको पर्याप्त कहिल्यै पाउन सक्दैनौ। ‘बागी’ अभिनेत्रीसँग उनको अनुहारमा एक विशेष आकर्षण र निर्दोषता छ। उनले उनको चित्रको चित्रण गर्न इन्स्टाग्राममा गएका थिए, “बिहानको मृत्यू हरेक दिन प्रारम्भिक कलको समयमा आइरहेको छ, आज मलाई सूर्य देख्न दिनुहोस्।” गीला कपालको साथ, माथि, disha एक डेज़ी को रूप मा ताजा लागी रहेको छ
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि प्रियंका चोप्रा टिनल शहरमा सबैभन्दा मेहनती अभिनेत्री मध्ये एक हो। त्यो उनको बलिउड क्यारियर मा केवल ऊँचाई बढती छैन तर पश्चिम मा पनि दिल जीतएको छ। ‘के यो रोमान्टिक’ अभिनेत्रीले सधैँ आफ्ना प्रशंसकहरू स्क्रिनमा देखापरेका भए पनि उनीहरूको प्रशंसकलाई गाह्रो बनाउँछिन्। सबैभन्दा टाढाको कार्यक्रमको साथ, प्रियंका विभिन्न समय क्षेत्रहरू बीच झल्किन्छ जुन उनको निद्रामा उनको सम्झौता भएको छ र रातभर पलायन गर्दछ। पूर्व मिस वर्ल्डले क्याप्शनको साथ स्वैच्छिक साझेदारी गर्न इन्स्टाग्राममा ल्यायो, “जब तपाईले सोच्नुभएको हो भने तपाईले जरुरी छ! #upallnightsleepallday #grr #jetlaggedtothemax “निद्रा भइरहेको भए तापनि बाकी भएन र कुनै मेकअप-अपको साथमा, पीeeसी ले स्वेच्छा देख्छौ ।
अशोक शर्माले एक सुन्दर फ्रेमको लागि बनाएको हो भने उनीसँग मेकअप भएको छैन वा छैन। एक बुलबुले अनुहारको साथ, चिन्ताजनक विशेषताहरु, बिन्दुमा ज्वलन्त, अनशुका सबै तस्विरहरुमा अत्यन्त सुन्दर सुन्दर देखिन्छ। यसको अधिकांश स्वयंसेवीहरू मेकअप छन्। उनले उनको छाला एक कचक अप गुड़िया जस्तै उनको जस्तो बनाउन मेनुबाट टाढा राख्न चाहन्छन्। ‘पारी’ अभिनेत्री इन्स्टाग्राम ले उनको स्वैच्छिक साझा गर्न को लागि जहां उनको खेलकूदहरु र एक काले बीनी मा पहेलो देख्न सकिन्छ। उनको पृष्ठभूमिको रूपमा हरियालीको साथ, क्लिक अत्यन्तै सुन्दर छ।
5/13 Bipasha Basu
बिपाशा बसुले उनीहरूका प्रशंसक र अनुयायीहरूलाई उनीहरूको सजिलो र ड्रोल-योग्य फोटोहरूको साथ सधैंभरि नै इन्टरग्राममा उपचार गरिरहेका थिए। शरीरका लागि मर्नु पर्ने साथै बिपाशासँग पनि बेकबेन्सनमा चेकिबोनहरूसँग सुन्दर अनुहार छ। उनको प्रत्येक चित्र को पछिल्लो एक भन्दा अधिक गर्मता को उजागर गर्दछ। कुनै पनि संगठन राम्रो तरिकाले गर्न को लागी एक आंकडा संग, बिपाशा उनको प्रशंसकहरु घुटनों मा कमजोर हुन्छ प्रत्येक पल्ट जब त्यो कदम। बोंगको सुन्दरताले उनीहरूको आफैंलाई बाँच्नका लागि आफुलाई आफुलाई बाँडेर बाँच्न पाईयो। “दिनको हेर … बस gloss❤️Easy breezy! त्यसो भए उनीहरु आफुले आफुलाई बिहे गरेकी थिइन्।
6/13 Sonakshi Sinha
सोनाक्षी सिन्हाले वर्षौंदेखि फैचकथाको रूपमा उभिएको छ। उनी विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू प्रयोग गर्न डराउँदैनन्, र उनीहरूको आफ्नै प्रवेशले उनको शैलीको विकल्प रोजेको छ – राम्रा स्पोर्ट्स ग्यारेन्टीमा सुन्दर बहको गाउनबाट। जब स्क्रिनमा छैन, सोनाक्षीले आफ्ना प्रशंसकहरूलाई आफ्नो स्थानमा अद्यावधिक कसरी गर्ने भनेर जान्दछन्, उनीहरूलाई घटनाका बारेमा वा उनीहरूको छुट्टै छुट्टै रोचक तस्विरहरूको उपचार गर्छन्। ‘न्यूयोर्कको अभिनेत्रीमा स्वागत छ’ एकदम सजिलो यात्रा हो र यसको इन्स्टाग्राम फिड एउटै प्रमाण हो। उनले इन्स्टाग्रामलाई उनको चित्रको साथ साझेदारीको साथमा लिएका थिए, “पारा .. पैरा .. प्रमोदवन! # ब्याकलिट # फ्रेश # मार्मिक #bholswedding #holiday #sonastravels “गैर मेकअप अपीलीमा, Sona आफ्नो पृष्ठभूमि को रूपमा सरिन जस्तो देखिन्छ।
कोहलको सङ्केत वा मेकअपको सबै भन्दा सानो ट्रेस छैन, तर अली भट्टलाई सुन्दर लगाउनबाट रोक्दैन। ‘राजी’ अभिनेत्री उनको उच्च चम्किलो मुस्कान संग पूर्ण उच्च चकलेट मुस्कुराउन सक्छ र त्यो बिना मेकअप पनि पूरा डैगरकार हुनेछ। अली एक अभिनेत्री हो, जो एक स्व प्रकृति वा खेलमा न्यूनतम मेकअप अप खेल गर्न मनपर्छ। उनले आफ्नो प्रेम र जीवन, एडवर्ड-उनको सुपर प्यारी बिल्लीको साथ “मेरो बच्चा ” को साथ एक स्वभाव साझा गर्न Instagram मा गए। अली र उनको प्यारी मित्र बिस्तर मा झूठ बोल रहे हो। अली अत्यन्तै निष्पक्ष देखिन्छ र हामी शर्त छौँ कि तपाई तपाईको आँखा एडवर्डबाट लिनु हुँदैन।
कैटरीना कैफ धेरै प्रयास बिना सुन्दर लगाउँछन्, यसको लाल कालीन लगाउँदा वा छुट्टी तस्बिरहरू पाउनुहोस्। अभिनेत्री पपार्जीजी को रडार मा छ कि छैन वा बेकार बिना हेर्न व्यवस्थित छ। एक अनुहार अनुहार संग, घुमाउरो शरीर र अनौपचारिक आकर्षण, कैटरीना विश्वभर लाखौँ प्यारो छ। अभिनेत्री उनको सुन्दरता र आकर्षण संग सबै प्रशंसकहरु को जीत जीता छ। उनी सधैं एक स्टंकर होइन चाहे कुनै कुरा के हो। त्यो कुनै नोभल अवतारमा बाहिर निस्कन सक्दछ र अझै पनि हाम्रो कुनै पनि भन्दा राम्ररी राम्रो देख्न सक्नेछ हाम्रो सबै भन्दा राम्रो दिन पनि। त्यो सुन्दर अनुहारको शक्ति हो। उनीहरु आफुले आफुलाई अलिकति माया गर्दछन् र आफुले आफुलाई माया गर्दछन्।
9/13 Jacqueline Fernandez
जैक्लेन फर्नांडीज बी-शहरमा एक बुलबुलेस्ट र चिरपाइस्ट अभिनेत्री मध्ये एक हो। उनको संक्रामक मुस्कान र अनौठो आकर्षण उनको मनमोहक सबै तरिकामा बनाउँछ। ट्रस्ट जक्यूलेनले तपाईंलाई सुन्दरता संग टाँस्न र उनीहरूले यो गर्नेछ। यसलाई मेकअप वा डे-ग्लैमको रूपमा बनाउनुहोस्, हेर-टु-मर्दा-हेर्नको लागी हेर्दा तपाईंलाई उपस्थिति बनाउनुपर्दछ जबसम्म उनीहरु सँगै गाह्रो हुन्छ। अभिनेत्री उनको सुन्दर सेतो बिरालो संग केहि डाउनटाइम को आनंद ले दुई आत्मियहरुलाई उनको इंस्टाग्राम ले लिया। उनीहरूलाई फ्रिक्वेन्सी फ्लाइन्टबाट टाढा छाड्दैनन्। असामान्यहरू निश्चित रूपमा सुन्दर छन्।
10/13 Shraddha Kapoor
श्रुद् कपूर बलिउडका धेरै ताराहरू मध्ये एक हुन् जसले आफूले कडा कडा परिश्रम र समर्पणको लागि एक आखा लगाएको छ। अभिनेत्री, जो उनको संगठनहरु लाई अझै सम्म साधारण रूप देखि परिष्कृत गर्न को लागी रुचि छ, श्रोता जो केहि पनि गर्दछन् मा अलग छ। अभिनेत्री सँधै उनको जस्तो लगाइरहेको छ। यसको लाल कालीन उपस्थिति वा यात्रा चित्रहरू संग रहनुहोस्, ‘आधा Girfriend’ सुन्दरता सधैंभरि चोरी चोरी हो। उनी प्रायः कुनै मेकअप अप देखाउँछन् र धूपको किरण जस्तो उज्यालो हुन्छ। उनले क्याप्शनको साथ एक स्वामी साझेदारी गर्न Instagram मा गए, “शुभ राती र एक बर्षाको सपना! “क्लिक गर्नुहोला, उनी एक युवतीको रातो सूट पहाइरहेका छन् र श्रृंगारको सेन्स बनाइन्छ, त्यो मनमोहक देखिन्छ।
11/13 Sunny Leone
सनी लियोन एक अभिनेत्री हो जुन सबै प्रकारका सुन्दर चित्रहरू सुन्दर देख्न सक्षम छन्। उनले कुनै पनि परिस्थितिमा साहसी, भव्य, रिक्ति वा रेकल हुन सक्छ। चलचित्रहरूमा वा उनको तस्बिरहरू सोशल मिडियामा रहनुहोस्, तिनका प्रशंसकहरूले उनलाई पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनी सोशल मिडियामा सबैभन्दा सक्रिय अभिनेता मध्ये एक हुन् र उनीहरूलाई आफ्ना प्रशंसकहरूलाई खातामा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर जान्दछन्। उनले क्याप्शन, “डे ड्रीम डाइरेक्टिङ” को साथ एक स्वामी साझा गर्न Instagram मा गए। कुनै eyeliner र कुनै contouring संग, सनी एक firefly जस्तै चमकदार चमक।
12/13 Ileana D’cruz
Ileana D’Cruz मात्र बबली व्यक्तित्व छ तर एक मुस्कान पनि मार्न सक्छ। त्यो टिनसेविले मा सबैभन्दा धेरै फोटोग्रानिक अनुहार छन्। अभिनेत्री सुन्दर गाढा भूरी आँखा छन् जसले तपाईंको हृदय पिउन सक्छ। राम्रो तरिकाले परिभाषित Cheekbones र एक जबड़े लाइन को लागि मरने को लागि, Ileana कुनै पनि फोटोग्राफर को लागि एकदम सही तस्वीर हो। भव्य अभिनेत्री एक यात्रा अजीब छ जसले यो detox को सबै भन्दा राम्रो रूप को देख्छ। सबैभन्दा ठूलो शहरको गर्मीलाई हराउन र पहाडहरूमा आत्मसमर्पण गर्ने मनपर्ने जस्तो, इलेना एक समुद्र तट बच्चा हो। उनले बाली मा आफ्नो छुट्टी को एक आनंददायक आत्मविश्वास को साझा गर्न को लागि Instagram ले कैप्शन संग, “मेरो टन्न मा काम! थोरै घण्टा 30 सम्म !!! उनीहरुका अनुसार उनीहरु आफुले आफुलाई आफुलाई माया गर्दछन्।
13/13 Richa Chadha
‘फुक्रे’ र ‘फुक्रे रिटर्न्स’ मा उनको ‘भोली पंजाब’ को सबैभन्दा अधिक प्रिय पात्र संग लहरहरु सिर्जना गरे पछि रिचा चाधाले आफुलाई तान्सेली शहरमा राखेको छ। कट्टर, बाह्य र फ्रैंकको लागि ज्ञात गरिएको, रिचा सधैं तिनको श्वासमा उनीहरूको श्रोता र सँगी बी-शहर अभिनेत्रीहरूले मनपराएका छन। गर्व गर्भनिरोधक, रिच कहिलेकाहीँ नींव, लाइनर र लिपस्टिक डच गर्न मन लाग्छ र सबैलाई छोडेर। उनीहरूले क्याप्शनको साथमा एक सेट सेट साझेदारी गर्न Instagram मा गए, “# आईट्सअन्तर्राष्ट्रीयडेयफफैक्चर #FollowYourBliss … यो पोस्ट कसरत क्लिक गर्नुहोस्। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराइदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। # बेचेको # गुनासोबह्पी #feministfirst #Nofilter #GlobalGypsy #RichaChadha “#:। के उसले उज्ज्वल र स्वाभाविक लाग्दैन?
Previous Best of 2018: Indian Bikini Bodies
Next EXCLUSIVE: Sara Ali Khan Gets Candid Ahead Of Her Second Release, ‘Simmba’